မိုးကုတွ မှို့မကှနွှာဖုံး သူဌေးကှီး တဦး ပှနပွေးဆှဲခံရ၊ မညသွညွ့အဖှဲ့ကမှနွး မသိရသေး – စှယျစုံသုတ
မိုးကုတွ မှို့မကှနွှာဖုံး သူဌေးကှီး တဦး ပှနပွေးဆှဲခံရ၊ မညသွညွ့အဖှဲ့ကမှနွး မသိရသေး
မနတြလေးတိုငွးဒသကှေီး မိုးကုတမွှို့နယကွ အောငမွှငတွဲ့ စီးပှားရေးလုပငွနွးရှငတွဈဦးဖှဈတဲ့ SP မုနွ့တိုကပွိုငရွှငွ ဦးကှောဝွငွးကို ဒီဇငဘွာ ၄ ရကနွမေ့နကွ ၈ နာရီခှဲလောကမွှာ ဖမွးဆီးခံရတယလွို့ မှို့နယအွုပွှုပရွေးမှူးက ပှောပါတယွ။
ဖမွးဆီခံရတာဟာ အောငခွမွှးသာရပကွှကမွှာလို့ သိရပှီး ဘယအွဖှဲ့အစညွးက ဖမွးတယဆွိုတာကို မသိရသေးပါဘူး ။
ပွနျပေးဆှဲခံရတယျလို့ ပွောဆိုနတောတှေ ရှိပွီး မိသားစုဝငျတှကေို ပွနျပေးငှေ တောငျးခံတာမြိုးလညျး မရှိသေးဘူးလို့ သိရပါတယျ။ SP မုနျ့တိုကျဟာ ရနျကုနျ မန်တလေး မိုးကုတျမွို့နယျတှမှော ဆိုငျခှဲတှေ ဖှငျ့လှဈပွီး ရောငျးခနြတေဲ့ ဆိုငျကွီးတခုဖွဈပါတယျ။
မိုးကုတ် မြို့မျက်နှာဖုံး သူဌေးကြီး တဦး ပြန်ပေးဆွဲခံရ၊ မည်သည့်အဖွဲ့ကမှန်း မသိရသေး
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မိုးကုတ်မြို့နယ်က အောင်မြင်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ SP မုန့်တိုက်ပိုင်ရှင် ဦးကျော်ဝင်းကို ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက်နေ့မနက် ၈ နာရီခွဲလောက်မှာ ဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့ မြို့နယ်အုပ်ျုပ်ရေးမှူးက ပြောပါတယ်။
ဖမ်းဆီခံရတာဟာ အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်မှာလို့ သိရပြီး ဘယ်အဖွဲ့အစည်းက ဖမ်းတယ်ဆိုတာကို မသိရသေးပါဘူး ။
ပြန်ပေးဆွဲခံရတယ်လို့ ပြောဆိုနေတာတွေ ရှိပြီး မိသားစုဝင်တွေကို ပြန်ပေးငွေ တောင်းခံတာမျိုးလည်း မရှိသေးဘူးလို့ သိရပါတယ်။ SP မုန့်တိုက်ဟာ ရန်ကုန် မန္တလေး မိုးကုတ်မြို့နယ်တွေမှာ ဆိုင်ခွဲတွေ ဖွင့်လှစ်ပြီး ရောင်းချနေတဲ့ ဆိုင်ကြီးတခုဖြစ်ပါတယ်။
“စံပွလယျယာမွတှေေ ဖျောဆောငျပေးပွီး သဖနျးဆိပျ ဆညျရသေောကျ လယျသမားတှဘေ၀ကို မွှငျ့တငျပေးတော့မယျ့ JICA”
ကိုဗစ် Positive အတည်ပြုလူနာ (၁)ဦး ထပ်မံသေဆုံး
“ဒျေါလာ ၂၇,၁၇၀ ( ၃၅၈ သိနျးကြျော) ဖွငျ့...
“ရက်ခိုငျ့တပျတျော နှငျ့ စဈကောငျစီတပျတို့...
“အသကျကငျးမဲ့နသေော ဒုတပျရငျးမှူး၏ လကျကိုငျဖုနျးမှ...
“မိဘမဲ့ကလေးပေါငျး ၈၇ ယောကျတို့အား နှဈ ၄၀ ကြျော...
“၁ သောငျးတနျနဲ့ ၅ ထောငျတနျ ငှစေက်ကူအတုတှေ ဖမျးမိ...
Copyright © 2022. Created by သုတစှယျစုံ.